Xizi ilifti bezinto Turkey yaseYurophu ikheshi mboniso
Matshi 23, 2017 - 26, i-15 Turkish ikheshi yaseYurophu mboniso eyayibanjelwe e Istanbul, Turkey, i exhibiti ...
Matshi 23, 2017 - 26, eyayibanjelwe e Istanbul, Turkey 15 Turkish ikheshi yaseYurophu mboniso, lo mboniso lidibanisa kwikhonkco kushishino ikheshi kwihlabathi onke amashishini ezaziwayo-kakuhle. Njengoko ekhokela abenzi imveliso ezizihambelayo ishishini ikheshi wasemakhiyshini, abathengisi kunye nabaniki nkonzo, Xizi ikheshi wamema nababonisi.
Lo mboniso, i-West elevator ukuya umnquba eliphangaleleyo evulekileyo macala omabini ukubonisa ngokupheleleyo iingenelo zoshishino West ilifti, amandla yobugcisa kunye nokuthengisa, ngothotho iimveliso ezintsha ezikrelekrele ukutsala amazwe amatsha ehlabathini lonke, ukuba beze entsha abathengi ubudala ukuya thethwano, baye babonisa ithemba kunye bekwilift West olunzulu intsebenziswano kunye nophuhliso eqhelekileyo. Lo mboniso, i-West ngokubhekele phaya kwishishini ikheshi ihlabathi elevator ukubonisa amandla uphawu olomeleleyo kunye namandla kakhulu zobugcisa. Ikamva, i-West iza kuzama ukuphonononga ilifti, nabakuvuyelayo ukuziqhelanisa 'ngokuphuma "isicwangciso-qhinga, obonisa njengesicwangiso ehlabathini brand.
Njengoko Turkish urhulumente elijongene inkonzo ikheshi, ngasentshonalanga ikheshi kweli lizwe kodwa washiya imisebenzi emininzi emangalisayo, enye iprojekthi Alacity Classic, kubalulekile isixeko eyiAlesehir eTurkey, kufutshane lzmir, oku imigangatho emihlanu iivenkile kunye imigangatho 22 indlu i eyiAlesehir neempawu ekrelekrele mihla. Xizi walungiselela iilifti abakhweli, iilifti umlilo, escalators neendledlana ezihlangabezana isiqinisekiso standard EN81 kunye CE zamvanje. Kuba xizi, le nto kuphela imfuneko yophuhliso, kodwa ke umsebenzi zokukhuthaza 'senziwe eTshayina "kwihlabathi.
Win e co-dala - 2017 xizi ilifti yokwabelana yokumaketha iqela
NgoFebruwari 24, ngasentshonalanga ilifti "ukudala mbono. Win ngo-2017 iqela share west ukuthengisa sifikelele "kwi w ...
NgoFebruwari 24, ngasentshonalanga ilifti "ukudala mbono. Win ngo-2017 west ilifti iqela share ukuthengisa "kwihotele lasentshonalanga kwaphela, uMnu West Union Mongameli Chen Xiaxin, ms izipho ezintsha Theo uMongameli, uMnu West ikheshi Mongameli wen-chao liu, entshonalanga ilifti ukuzithengisa ms yesigqeba lily van kunye nolawulo nkampani kunye nogqweso kulo lonke kwabathengisayo lizwe kunye abakhethiweyo yokuthengisa bahlanganisana, babona esi siganeko kunye.
Party kwi "Hangzhou kunamkela" ingoma ikhatywe, ngoko wangena ikhonkco eziphambili qela - West yokuhamba igama le nkonzo. Itheko ubezukile ukutyelela kwiKomiti eSisigxina iKomiti kaMasipala Lin'an, uNkszn Shen Hui kunye West amaqabane Siphakamisele zibone lo mzuzu zembali, amanzi avela kuzo zonke iimbombo zomhlaba benika "West" oku kuyaqhba umoya wesizwe Chinese lemveliso iingcibi imboni brand. Ikheshi West engamashumi amathathu yophuhliso, ulwandiso, ngathi nethontsi ilitye yokonakala, imilambo kunye olubi zolwandle, inkulwlana kancinci ekufumaneni uphose brilliant namhlanje. Namhlanje Xizi ilifti, kwaphulwa Cocoon phandle, entlahleni eyothusayo, iya kuba luzuko uhambo oluya entsha!
Kulandele nguMongameli Liu Wenchao kunye ukumaketha umlawuli yesigqeba UXie Liping ezingama-umbongo - "tirhisa West": iintyatyambo kwi West, likuxhoxhela ngamashumi amathathu anesithandathu eminyaka, sasihamba phambi kunye, lonke ixesha ndisoloko ukubhala Phantsi umbongo, kangangokuba umoya ukucula iingcinga kunzima ... ... isandi ukuphindwa mbongo kwaye ingxelo yomsebenzi yenkampani nzima kunye nokubila iifoto ezindala, iinkumbulo wonke umva elidlulileyo. I-The I-The I-
Liu kunye UXie bebonke yemibongo ukuphindwa Kwakhona izitya co-umongameli we-West, uMnu Chen Xiaoxin abavakalelwa, wathi ukuba West namhlanje, iimpumelelo ilifti ayikho ngengozi, kodwa kuzo zonke iimbombo zomhlaba zonke iqabane obalaseleyo kunye bekwilift West basebenze kunye, ecaleni kwenye Abangakwaziyo ukuza. Thina thowusti, yaye ndinqwenela ukuba West elevator mboniso grand, ebathembisa! Le ngokuhlwa lonke lalizele newayini mellow, wonke umntu kunye nomnikelo fun.
Ifom ye iqembu abazizityebi inemibalabala, inkqubo emangalisayo engapheliyo. Itheko kwakhona walungisa sosuku lokuzalwa zamaqela amahlakani ezisixhenxe yokuzalwa, uMnu Liu Wenchao, uMongameli noNkszn UXie Liping, uMongameli Marketing, ngokobuqu wathumela iminqweno emihle ukuchitha zihlandlo uthando kunye ixesha elide.
Ubusuku engummangaliso ehamba kunye novuyo yafikelela esiphelweni, West elevator isidlo olubonakalayo wavula sisiqalo ukubuya yentsebenziswano. Ukuba akukho yokuhlala, apho iphuma ingena - amaqabane abathandekayo, Wamkelekile ukuya ekhaya!
Xa nokudalwa sub-ilifti share sentengiso West iza kulandela emangalisayo, ngoko hlala ubukele!